Nin watay lacag ka badan 1 milyen oo dollar oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho. - Somalia Focus
Nin watay lacag ka badan 1 milyen oo dollar oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
by Hassan Ali | Friday, Nov 4, 2016 | 225 views
4,November,2016(SofoNews) War ay heleyso SmoaliaFocus ayaa sheegay in Saraakiisha Garoonka diyaaradaha Muqdisho ay gacanta ku dhigeen Nin u shaqeeya Shirkadda Xawaalladda ee Amal, kaasi oo watay Boorso ay ku jirtay lacag dhan Hal milyan iyo shan boqol oo kun oo Dollar.
Ninkaasi ayaa la hadal-hayaa inuu ku sii jeeday magaalladda Hargeysa ee Maamulka Somaliland, halka warar kalena sheegayaan inuu ku sii jeeday magaalladda Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Xawaalladda Amal oo ka mid ah Shirkadaha Xawaaladaha Somalia ayaa waxay dhawaan Bangi ka furteen magaalladda Muqdisho, mana kala cadda sababaha Adeegga Bangiga loogu adeegsan waayey Lacagta faraha badan ee uu Hawl-wadeenkaasi la safrayey.
Saraakiisha Sare ee Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ayaa la sheegay inay gaareen Garoonka, waxayna warbixin ka dhegeysteen Saraakiishii qabtay Hawlwadeenkaasi u shaqeeya Shirkadda Amal iyo Kharajka caddaanka ee uu Boorsada ku watay.
Baaritaano ku aadan arrimahaasi ayaa haatan soconaya halka loo waday Lacagtaasi iyo Hawlaha loo adeegsan lahaa.
Hay’adda Lacagaha Adduunka (IMF) iyo Bangiga Adduunka (World Bank) waxay Hay’addaha Maaliyadda iyo Ammaanka ee Dowladda Federalka ku booriyeen inay adkeeyaan Nidaamka Xawaaladaha, waxayna Hay’adahaasi farta ku go’deen Nidaamka ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah Xawaaladaha Soomaalida.
Shirka ganacsiga Africa iyo Turkiga oo ka furmya Istambul
Waxgarad ku howlan dejinta dagaal ka dhacaya Caabud-Waaq